Friday, 01 June 2012 12:04	सम्पादकीय
भिडसँग डराउने बानी परेको नेपाल प्रहरी अचेल मनोबल बढेर हो कि कानुन व्यवस्था कायम राख्न गोली प्रहारसम्म गर्न पनि अग्रसर हुन थालेको छ। बिहीबारमात्रै प्रहरीले कानुन व्यवस्था कायम राख्न गोली प्रहार गरेको दुई वटा घटना प्रकाशमा आएका छन्। सिरहामा प्रहरीले अपहरणको आरोपमा पत्रे्कको व्यक्तिहरूलाई छुटाउन राजमार्गै अवरोध गरिएको थियो। प्रहरीले गोली प्रहार गरेर पनि राजमार्गको अवरोध हटाएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ डलर साँट्ने नाममा ठगी गर्ने गिरोहलाई पक्रन जाँदा प्रहरीमाथि आक्रमण भएपछि गोली हानेको बताइएको छ। गोली प्रहार गर्नुपूर्व दिनुपर्ने चेतावनीलगायत अन्य सावधानी र सुरक्षाका उपाय प्रहरीले अवलम्बन गरे नगरेको थाहा भएको छैन। तैपनि, भिडले कानुन व्यवस्था हातमा लिएर मनपरी गर्दासमेत प्रहरीले तामासा हेरेर बस्न छाडेको हो भने यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।
सामन्ती संस्कारका कारण नेपाली समाजमा कानुन मिच्नु पौरख ठानिन्छ। कानुन मिच्दा पनि कारबाही नहुनु शक्ति, सामर्थ्य र सत्तामा पहुँचको लक्षण मानिन्छ। यसैले अलिकति पनि बल भए कानुन मान्नै पर्दैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले पनि धेरैजसो 'निर्धा'माथि ऐनको प्रयोग गर्छ र 'बलिया'लाई छुँदैन। यसैले भिडले कुनै पनि बेला र मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा पनि कानुन हातमा लिने गरेको छ। दिनहुँ हजारौँ व्यक्ति ओहोर दोहोर गर्नुपर्न राजमार्गहरूसमेत सानो विवादमा घन्टौँ र कहिले त दिनौ बन्द गरिन्छ। अस्पताल लान ल्याइएकी सुत्केरीले बसमै बच्चा जन्माउँदासम्म सबै तमासा हेरेर बस्छन्। यस्तो गैरजिम्मेवार अराजकता राज्यकै संयन्त्रहरूको कारण फैलेको हो। मूलतः राजनीतिक दलहरूले यस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिने गरेका छन्। सायल, यसैले पनि प्रशासनले तमासे हुन रुचाएको हुनुपर्छ। यसैले प्रहरीले अपहरणजस्तो गम्भीर अपराधमा पत्रे्कका व्यक्तिहरूलाई छुटाउन पनि राजमार्ग बन्द गर्ने आँट गरिएको हुनसक्छ। भिडले दिएको दबाब सामु नझुकी बल प्रयोग गरेरै पनि राजमार्ग खुलाउन प्रहरी यसरी नै अग्रसर हुने हो भने आगामी दिनमा अरूले यस्तो आँट गर्नेछैनन्।
अहिलेसम्मको दृष्टान्त हेर्दा भने यी दुवै घटना पटकेमात्र हुने सन्देह बढी हुन्छ। कारण, बल प्रयोग गर्न प्रहरीको मनोबल उच्च रहनुपर्छ। मनोबल उचा राख्न आडभरोसले मात्र पुग्दैन नैतिक शक्ति पनि चाहिन्छ। नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचारजस्ता विकृति नेपाल प्रहरीमा संस्थागतै भएको मानिन्छ। संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने काममा सहकर्मीहरू लागेको गुनासो त प्रहरी महानिरीक्षक आफैँले गरेका छन्। यसैले प्रहरीको यो अग्रसरता पटके हुने हो कि भन्ने सन्देह बढेको हो। जेहोस्, प्रयासै नथाली सफलता प्राप्त हुँदैन। यसैले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा र कानुनको पालना गराउने कर्तव्य पुरा गर्न प्रहरी अग्रसर हुने अभ्यास निरन्तर रहनुपर्छ। यत्ति हो यस क्रममा कुनै पनि बहानामा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्न हुँदैन र जनधनको सकेसम्म बढी हिफाजत गर्नुपर्छ। कर्तव्यप्रति संवेदनशील हुने व्यक्तिको नैतिक मनोबल पनि बलियो जो हुन्छ।
Asti bharkhar ko Janjati aandolan birsanu bhayo! Tapai harukai tauko ra camera lai bhakundo banayera khelda yahi police le ramita herera baseko!
Mohan sharma jee asti ramita garyo aaja ramro kaam garyo k ramro kaam ko taarif nagarnu aba purano kura samjhera basnu ho? atleast aba ta ramro kaam garyo vanera tarif garnus.. kati puranu kura samjhinu hunchha
Ani Bhramin samaj ko bandha huda pani yo policelay janjati shavashad kutaee khako herayko.Tiyo chaee Birsinu Vo.Tapee jasto nikrista soch vayako brahmin sathiharulay nayee deshma jatiya yudha nimtauna aatayko ho.